Nhau - Mutengo Weyakagadzirwa Grass Chigadzirwa
1. Mutengo Wezvakagadzirwa neGrass Chigadzirwa
Mafomu akasiyana ane zvakasiyana zvinodiwa kune izvo zvinotsanangurwa, uye zvakasiyana maratidziro zvinoreva mutengo wakasiyana. Iwo makuru maratidziro ndeemidziyo, murwi kukwirira, dtex, uye musono kuomarara.
Zviitiko Zvikuru Zvinokanganisa Iyo Yekugadzira Grass Mutengo:
Zvinhu zvakawanda zvinoshanda pamwe chete kuona huswa hwekuisira mitengo. Zvishandiso, huremu hwemeso (Kutsanangurwa nePile kureba, Dtex, uye Stitch Density) uye kutsigira zvinhu zvitatu zvakakosha. Order huwandu hunokanganisa iyo yekugadzira mutengo zvakare.
Kazhinji kutaura, izvo zvigadzirwa zvehuswa hwemitambo zvakasiyana nezvakashandiswa kune huswa hwenzvimbo. Izvo zvinogadzirwa nezvakasiyana zvakasiyana: mutambo wehuswa unotarisana nekufamba kwekufamba, dziviriro yemutambi, uye kupfeka-kuramba; Nepo huswa hwenzvimbo hunotarisa zvakanyanya kutaridzika (Tarisa senge huswa chaihwo, kana kunyangwe zvirinani) UV-kuramba, uye chengetedzo. Kunze kwezvo,
Kureba kwemurwi, Dtex, uye Stitch Density inoshanda pamwechete kuona huremu hwemeso. Kutarisana nehuremu chinhu chakakosha kukanganisa mashandiro ehuswa uye mutengo. Icho chikonzero chiri pachena: kurema kumeso kurema kunoreva zvimwe zvinhu uye kunoguma nemutengo wakakwira.
Iwo ekutsigira akajairika ndeye SBR yakavharwa kutsigira uye polyurethane (PU) yakatsigirwa kutsigirwa. Polyurethane kurongedza kuri nani asi nemutengo wakakwirira kwazvo (ungangoita USD1.0 yakakwira pa square mita). Latex kutsigira kwakanaka zvakakwana muzviitiko zvakawanda. Rumwe ruzivo nezve kutsigirwa, ndapota shanya posvo Izvo Chokwadi cheArtificial Grass Kutsigira.